Moa ny machining-by faritra ao amin'ny foibe machining CNC tsara na mafy? - China Changzhou Zhanhang International
Moa ny machining-by faritra ao amin'ny foibe machining CNC tsara na mafy?
Voalohany, ny machining vy faritra ao CNC machining toerana tsara ho an'ny lalamby sarotra na tsara ho an'ny lalamby.
Iron faritra dia somary iombonana workpieces. Maro ny mpanjifa no manontany raha ny machining foibe dia tsy ampiasaina ao amin'ny foibe machining ny fandraisana ny ampahany vy. Ve ny "foibe machining Cnc machining faritra vy tsara na mafy?" Io fanontaniana dia maro tokoa ny rivotra, mankao tsiroaroa ny CNC. Ny olana ny tsy mahazatra ao amin'ny machining mpanjifa afovoany dia voavaha ny Taicheng CNC amin'izao fotoana izao.
Alohan'ny mandinika ny mafy lalana manokana na ny lalana, Voalohany indrindra, toy ny CNC machining foibe mpanamboatra, tokony hanontany izay ny vy faritra ny mpanjifa te dingana ahoana ny habeny dia lehibe, na dia nahavita na Roughing, sns Raha tsy misy fahafantarana ireo tsipiriany, na dia ny mpanamboatra manokana amin'ny famokarana CNC machining foibe dia tsy afaka manome ny valiny marina. Amin'ny ankapobeny, ny ampahany vy izay matetika isika no milaza fa somary lehibe workpieces. Mazava ho azy, fa tsy hanapaka avy tranga manokana. Avy eo isika dia hampiasa vy faritra lehibe kokoa.
Ny lehibe-salantsalany faritra vy dia ny avo lenta, sy ny fanapahana lehibe vola amin'ny ankapobeny. Amin'ity tranga ity, ny mafy indrindra lalamby no mety, ny mafy tsara lalamby manana Hentitra loatra, horohorontany mahery fanoherana sy ny vokany afaka, ary mety ho andraikitra mavesatra-fanapahana. Raha toa ianao ka mampiasa tariby CNC machining foibe, dia tsy dia tsara tokoa, ary na dia manimba ny lalamby. Ny rail dia mety ho sembana noho ny tsy fahafahany hahatohitra adidy mavesatra-fanapahana. Noho izany, rehefa mpanjifa manokana fepetra, ny CNC machining foibe mpanamboatra ankapobeny fahazoan-dalana hidirana ny mpividy hampiasa mafy-lalana CNC machining foibe, ary toy izany koa karazana CNC machining foibe mafy lalamby dia mora noho ny andalana lalamby, ary ny CNC machining foibe amin'ny lehibe kapoka dia toy ny VMC1270 sy ny sisa rehetra tsy voatery tsy misy andalana lalamby, satria lehibe ireo-tapaka lalan-dra CNC machining foibe no ampiasaina amin'ny ankapobeny dia andraikitra mavesatra-fanapahana.
Faharoa, ny CNC machining foibe lalana mafy dia tsara noho ny tsipika rail
Ao ny ambony, misy ihany koa ny sasany milaza ny tombony ny mafy lalamby, avo Hentitra loatra, tsara fanoherana sy ny dona mafy entana-mitondra fahafahana. Ireo tombony avy amin'ny firafitry ny mafy lalamby. Ny mafy-lalana CNC machining foibe dia CNC machining foibe miaraka amin'ny mpitari-dalana lalamby sy ny fampidirana am-pandriana vatana, izany hoe, ny mpitari-dalana hihaika dia atsipy teo am-parafara. Io rafitra henjana dia mihoatra noho ny CNC machining foibe amin'ny baolina na baolina mpitari-dalana. Na dia izany aza, misy fahadisoana eo amin'ny marina sy ny famokarana machining fahombiazana, fa ny tsipika CNC machining foibe. Tsy mora ny hanimba loatra rehefa lehibe machining-salantsalany ampahany vy.
Post fotoana: Aug-10-2018
Address: 1022, Fanorenana 1, na tsara tarehy Commercial Plaza, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province Shina